Ugwu nke Moher, nleta pụrụ iche na Ireland | Akụkọ Njem
Ihu igwe, ike nke okike na oge emepụtawo ọmarịcha ala gburugburu ụwa. Dịka ọmụmaatụ, na Ireland, mba nwere ọtụtụ pel ndị njem nleta, enwere Ugwu nke Moher.
Nzukọ na mberede n'etiti ala na oké osimiri ebe a ewerewo ọnọdụ dị egwu, nke dị egwu, ọ bụkwa ya mere ọ ji bụrụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kachasị ama na mba Europe a. You maara ha? Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, attentionaa ntị n'ihi na ebe anyị na-ahapụ gị ozi bara uru nke mere na nke na-esote gị nleta na Ireland atụla uche ha.
1 Ugwu nke Moher
2 Uzo esi aga na Cliffs of Moher
3 Gaa Leta ugwu ugwu nke Moher
4 Zụta tiketi maka Cliffs nke Moher
Ha nọ na Ireland na mpaghara clare, na mpaghara a maara dị ka Burren. Ihe mejupụtara ha bu limestone na udidi nkume nke edeturu apịtị nke nwere apịtị na mineral di iche iche nke malitere ihe karịrị 300 nde afọ gara aga. N'ezie, ọ ka ga-ekwe omume ịhụ oghere nke osimiri oge ochie hapụrụ ka ọ na-awa nkume ahụ na ala ala ọnụ ọnụ ugwu, nke bụ kpọmkwem ebe okwute kacha ochie dị.
Ugwu ha dị na etiti ụzọ njem njem n'ụsọ osimiri a maara dị ka Wild Atlantic Way, ụzọ dị kilomita 2500 nke enwere ike iji ụkwụ, ụgbọ ala ma ọ bụ igwe. Ha dịkwa nso na ọdụ ụgbọ elu mba Shannon ma dị nso na obodo Galway na Limerick.
Officialzọ gọọmentị ma ọ bụ Ugwu nke Moher Walk Ọ na-agba 18 kilomita site na Hag's Head ruo Doolin ma gụnye nleta na Visitor Center na ama O'Brien Tower nke bụ nnukwu ebe ọhụụ. N’aka nke ya, enwere ụzọ ụzọ abụọ dịdebere etiti ọbịa ahụ, nke gọọmentị dị mma na nke na-enweghị nchekwa n’ihi na ọ na-eru nso na nsọtụ ya.
Uzo esi aga na Cliffs of Moher
Can nwere ike iji ụgbọ ala ọha, igwe kwụ otu ebe, ụkwụ na ụgbọ ala. N'ebe a, njem ahụ dị mkpa n'ihi na ọ dị ka akụkọ Ithaca, njem ahụ dị mkpa karịa ebe ị na-aga. Ọ bụrụ na ị na-eji ụgbọ ala ị nwere ike ịgbazite otu ebe ọ bụla na mba ma ọ bụ obodo ndị dị nso nke Galway ma ọ bụ Limerick.
E nwere ebe a na-adọba ụgbọala na nso ebe ahụ, n'ihu ụlọ ọrụ ndị ọbịa ma ị nwere ike ịzụta tiketi nnabata ebe ahụ. Na tiketi ahụ, a na-etinye ebe a na-adọba ụgbọala na-akparaghị ókè.
Y’oburu n’inwe igwe ugbo ala, odi nma ka a kpotara webusaiti nke ugwu a n’ihi na gha agha idobe oghere. I nwekwara ike iji tagzi si obodo ndị anyị kpọrọ na mbụ. Ma n'ezie site na bọs ndị njem nleta dị anya, ọkachasị n'etiti Eprel na Septemba.
Site na Limerick, Ennis, Cork, Galway ma ọ bụ Dublin ị nwere ike ịgbazite ha ụbọchị njegharị na bọs na site na Dublin njem ahụ na-ewe otu ụbọchị. Ha na-apụkarị n'elekere asaa nke ụtụtụ ma laghachi na elekere asaa nke abalị.
I nwekwara ike banye ebe ụgbọ oloko. Were ụgbọ oloko dị na Dublin gaa Ennis site na Limerick si kwa ebe ahu busi. All Irish obodo ejikọrọ na ụgbọ okporo ígwè ya mere ọ dị mfe. Ọ bụrụ n’ikpebie ịga ije n’okporo ụzọ ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ rute Doolin ebe ụzọ ahụ gafere n’akụkụ ọnụ ugwu ahụ na-amalite ebe a.
Site na Doolin ruo na ọnụ ugwu enwere kilomita 8 ma ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịlaghachi azụ gaa n’isi Hag ọ dị kilomita iri na abụọ.
E nwere ọtụtụ ụzọ ịgba ịnyịnya ígwè Ha na-agba ohia na ugwu ugwu nke Clare n’ozuzu ha. Lonely Planet na-ekwu na County Clare bụ otu n'ime ebe iri kachasị mma n'ụwa iji gbaa igwe kwụ otu ebe ... Eziokwu ahụ bụ na site na igwe kwụ otu ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ụsọ osimiri ọla edo nke Atlantic, gaa site n'obodo ruo n'obodo na site na ụlọ mmanya ruo ụlọ mmanya na agbanyeghị. Nwere ike nweta maapụ ụzọ gasị n’etiti ndị ọbịa ma enwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe na ọtụtụ obodo dị nso, dịka ọmụmaatụ Doolin.
Ọ bụrụ na ị jiri bọs ọhaneze, ịnwere ike ijide bọs na Galway ma ọ bụ Dublin ozugbo. Busgbọ ala ndị ahụ bụ Ụgbọ ala Eireann ha na-agba ọsọ ugboro ise n'ụbọchị n'oge anwụ n'etiti Ennis na Galway na afọ ndị ọzọ nke afọ atọ n'ụbọchị.
Gaa Leta ugwu ugwu nke Moher
Ugwu mepee n'afọ niile ma e wezụga December 24, 25 na 26. Na Jenụwarị na Febụwarị ha na-emeghe site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede, Machị na Eprel ọ na-amalite site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke abalị na n’agbata Mee na Ọgọstụ n’agbata elekere asatọ nke ụtụtụ na elekere itoolu nke abalị. Septemba na Ọktọba mepee site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke mgbede na Nọvemba na Disemba site na 9 ruo 5 elekere.
Y’oburu n’inwere eleta ihe ngosi puru iche n’elu ugwu di n’etiti onye obia wee jua ije ihe dika nkeji iri ato tupu emechie. Otu n'ime ebe kachasị iche na ugwu dị na mgbidi ochie ejiri mara O'Brien Tower Ọ bụ ezie na ọ na-emeghe kwa ụbọchị, ọ nwere oge dị iche iche dabere na oge nke afọ. E nwere ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ, ebe a na-arụ ọrụ aka na ụlọ ahịa ihe ncheta.
Biko mara nke ahụ ihu igwe na-emetụta ọbịbịa nke ọnụ ọnụ ugwu ya mere gbalịa inwe atụmatụ mgbanwe. Oge dị elu bụ July na August mana ị ga-ahụkwa ọtụtụ mmadụ site n ’Eprel na Septemba. Oge kachasị njọ ịga ma ọ bụrụ na ịchọrọ jụụ dị n'etiti elekere 11 nke ụtụtụ na elekere anọ nke abalị. Na ma ọ bụrụ na ị nwere ike izere ngwụsị izu ka mma.
Banyere ihu igwe enwere ọtụtụ agba nke gụnyere odo, oroma na ọbara ọbara iji kọwaa ọnọdụ ha: na acha ọbara ọbara, n'ezie, etiti ahụ mechiri ma ndị mmadụ kpọpụ ma ọ bụrụ na enwere ndị mmadụ gburugburu. Nwere ike ịlele nke a mgbe niile na weebụsaịtị.
Zụta tiketi maka Cliffs nke Moher
Savechekwa oge ị nwere ike ime ihe niile zụta online. Tiketi ahụ gụnyere akụrụngwa nke ebe dị n'èzí na ime ụlọ, ọnụ ụzọ nke ebe ndị ọbịa na ihe ngosi ya na ebe a na-adọba ụgbọala.
Ntaneti ị nwere ike ide akwụkwọ ruru tiketi itoolu. Ọnụ ego onye okenye ruru 6 euro na ụmụaka ruo afọ 16 bụ n'efu. Mụ akwụkwọ na karịa 65s na-akwụ ụgwọ euro 4. Eziokwu bụ na ịme ndoputa na ịzụta ịntanetị bụ nke kachasị mma, mgbe ahụ naanị ị ga-anụrịrị ụtọ. Ọ bụrụ na ihu igwe dị mma ị ga-enwe ọmarịcha echiche nke Aran Islands na Galway Bay na ugwu nke otu ógbè ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ireland » The Cliffs of Moher, nleta pụrụ iche na Ireland